स्लिम बन्न डाइटिसियनका ७ सुझाव
पुस २३, २०७३ शनिवार २०:०७:०० प्रकाशित
युवतीहरुले आफनो शरीर कस्तो होस् भन्ने बिषयमा चल्ने कुराकानीमा उत्तर दिँदै भन्छन्,–जिरो फिगर । हो, नेपाली समाजमा आएको परिवर्तनसँगै फेसन डिजाइनको ज्ञानले गर्दा पनि युवतीहरु स्लिम बन्न र देखिन लालायित भएको पाइन्छ ।
स्लिम बन्ने चलन यसरी व्यापक हुनुमा कतै न कतै फिल्मी दुनियाँ वा अन्य वस्तुको प्रभाव पनि परेको हुन्छ । भर्खरका युवतीलाई स्लिम बन्ने फेसनले छपक्कै गाँजेको हुन्छ । नहोस् पनि किन र आखिर यो उमेर समूहका सबैजसो युवाहरु स्लिम, दुब्ली पातली, कम्मर छिनेकी केटीप्रति आकर्षित हुन्छन् । त्यसो त स्वास्थ्यका लागिसमेत मोटो शरीर राम्रो मानिदैन । त्यसमाथि नियमित काम गर्न पनि मोटो मान्छे दुब्लो,पातलोजस्तो छरितो नहुने, अरुले देख्दा पनि ज्यान नमिलेको भद्दाजस्तो देखिने हुन्छ । यिनै कारणले भर्खरको उमेरका युवतीहरु मात्र नभएर उमेर खाएकाहरु पनि शरीर स्लिम पार्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । स्लिम बन्नका लागि डाइटिङ अर्थात् कम खाने चलन बढ्दो छ । युवतीहरु स्लिम बन्ने होडमा पानी मात्र पिएर डाइटिङ गर्ने गर्दछन् । यसो गर्नु स्वास्थ्यको लागि हानीकारक हुन्छ । हामीले बिर्सेर पनि तौल घटाउने बहानामा भोकभोकै बसेर स्वास्थ्यलाई चुनौती दिने काम गर्नु हुदैन ।
मानव शरीरलाई दैनिक कार्बोहाइड्रटल फ्याट, प्रोटिन, भिटामिन, मिनरलजस्ता तत्व आवश्यक पर्छन् । डाइटिङ गर्दा यी तत्व शरीरमा पुग्न पाउँदैनन् । जसले गर्दा हामीलाई हड्डी सम्बन्धी रोगले समात्ने, ब्लडप्रेसर कम हुने, तनाव र थकानले काम गर्न जाँगर नलाग्ने, शरीर भारी लाग्ने जस्ता समस्या आउन सक्छन् । त्यसैले तौल घटाउन हामीले केही फरक बिधि अपनाउन सक्छौ । यो तरिकाबाट तौल पनि घटाउन सकिने र हामीमा कुनैपनि साइडइफेक्ट पनि नदेखिने भएकोले नखानुभन्दा यी तरिका अपनाउनु हरेक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन्छ ।
– नेपालीको बानी खाना खाँदा एकैचोटी र बढी खाने हुन्छ । खाने समयको अन्तर लामो राखेर हामी धेरै खाइरहेका हुन्छौं । स्वस्थ रहन र तौल नियन्त्रण गर्न हामीले यो बानी सुधार्नै पर्छ । कम्तीमा दिनको ४ पटक खाने तर एकदम कम कम खाने बानी बसाउनु पर्छ । बिहानको ब्रेकफास्ट हामीलाई अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । बे्रकफास्टमा –फापरको रोटी, जौ, छाली निकालेको दूध, अण्डाको सेतो भाग र पर्याप्त मात्रामा फलफूल खाने ।
– बिहानको खानामा आफनो उचाइ र उमेर अनुसार भात खाने । खानामा हरियो सागसब्जी, पर्याप्तमात्रामा सलाद र केही मात्रामा प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खाने । शाकाहारीले दही, तोफू, पनिरलगायतका खाद्यपदार्थ खाने । मांशाहारीले चाहिँ कम तेल राखेर बनाएको कुखुरा र माछाका परिकार खाने । सकेसम्म रातो मासु कम गर्ने । अतः ठिक्कको उमेर तथा उचाइ भएकाहरुले खानामा भात ३० देखि ४० ग्राम खाएमा तौल नियन्त्रण हुन्छ र शरीरलाई आवश्यक तत्व पनि पुग्छ ।
– खाजाको समयमा विभिन्न फलफूल खाने । भुजा, केराउ वा चनाको तरकारी तथा चिउरा र तरकारी खान सकिन्छ । संभव भएसम्म मोही पिउने र फलफूल खान जोड दिने । हामीमा जुस पिएमा त्यसले फलफूलको काम गर्छ भन्ने भ्रम छ । तर जुसले हाम्रो तौल झनै बढाउने काम गर्छ । फलफूलको फाइबर नै शरीरलाई आवश्यक पर्ने भएकोले पूरै फलफूल काटेर खाने गर्नुपर्छ ।
– बेलुकाको खाना सक्दो छिटो खाने गर्नुपर्छ । सकेसम्म ७ देखि ८ बजेको समयमा खाना खाइ सक्नुुपर्छ । साँझको खानामा भातभन्दा रोटी बढी खाने गर्नुपर्छ । त्यस्तै खाना खानेबित्तिकै सुत्दा तौल बढ्ने प्रवल सम्भावना हुन्छ । खाना खाएको १\_२ घण्टासम्म नसुत्ने, हिँडडुल गर्ने वा अन्य काम गर्नु पर्छ । राति ढिलोमा १० बजे सुत्ने र बिहान उज्यालो हुनुभन्दा एकघण्टा अगाडि उठ्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।
– दिनभरीमा कम्तीमा ३ लिटर पानी पिउनु अनिवार्य हुन्छ । पानीको सट्टा जुस र अरु पेय पदार्थ पिएर पुग्दैन , सादा पानी नै पिउँनुपर्छ । पार्टी वा कार्यक्रममा जाँदा ग्रेभी खानेकुरा सकेसम्म कम खाने र त्यसको सट्टा पिस खानेकुरा लिने गर्नुपर्छ । ग्रेभि र मसलादार खानाको सट्टा हामीले सकेसम्म सलाद खान जोड दिने,अल्कोहल र बियरजस्ता पेयपदार्थ सेवन नगर्ने, सकारात्मक सोच राख्ने, सकेसम्म आफूलाई खुशी राख्नेजस्ता बानी बसाल्नुपर्छ ।
– खाद्य सामग्री किन्न जाँदा पनि फाइबरयुक्त र कम फ्याट भएका खाघपदार्थ किन्ने गर्नुपर्छ । विषेशतः फापरबाट बनेका खानेकुरा खाने गर्नुपर्छ । खानेकुरामा आलु, तरुल, सखरखण्डलगायत गुलिया खानेकुराहरुमा जोड दिनु हुँदैन । चिया तथा कफी खानुपर्दा चिनीको सट्टा भेनिलाको एस्ट्रयाक प्रयोग गरे राम्रो हुन्छ ।
– हामी स्वास्थ्य चुस्त र दुरुस्त राख्न तथा तौल नियन्त्रण गर्न भन्दै आफ्नै ढंगबाट विभिन्न व्यायाम गरिरहेका हुन्छौं । यस्ता नजानी गरिएका क्रियाकलापले हामीलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा गरिरहेको हुन्छ । उदाहरणका लागि कमजोर मान्छेले कस्तो व्यायाम गर्ने, मोटो मान्छेले कस्तो व्यायाम गर्ने ? विभिन्न स्वास्थ्यमा समस्या भएकाहरुले कस्तो व्यायाम गर्ने ? सबैलाई एकैप्रकारको व्यायाम सहज नहुन पनि सक्छ । त्यसैले व्यायाम गर्दा सम्बन्धित डा. तथा विशेषज्ञको सल्लाहमा व्यायाम गर्नु पर्छ । व्यायाम गरि सकेपछि राति भिजाएर राखेको देशी बादाम दूधमा राखेर खान सकिन्छ, जसले स्वस्थ स्फूर्तीका साथै तौल नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ ।
१. नर्भिकको ध्यानाकर्षण– राष्ट्रकविको उपचार गर्ने प्रविधि र विशेषज्ञ नेपालमै छन्
२. अस्पतालमै नर्समाथि अन्धाधुन्ध चक्कु आक्रमण [भिडियो]
३. संघीयता अनुसारका स्वास्थ्य संरचना बनाउँदैछौ : स्वास्थ्य राज्यमन्त्री
६. गंगालालमा भित्रियो नेपालमै पहिलो पटक ६४० स्लाइसको कार्डियाक सिटी स्क्यान
७. भरतपुर अस्पताललाई प्रादेशिक मेडिकल कलेज बनाइने
८. चिकित्सा शिक्षामा एकिकृत प्रवेश परीक्षाको कार्ययोजना ल्याउन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन
९. दमौली अस्पतालमा ज्वरो र रुघाखोकीका बिरामी बढे
१०. अल्का अस्पतालले हेल्दी बेबी प्रतियोगिता गर्ने
१. भारतमा फैलिएको निपा भाइरस नेपालमा संक्रमण हुने सम्भावना कति?
२. महिलालाई दुःख दिने अब्स्टेट्रिक फिस्टुला, यी चार अस्पतालमा हुन्छ नि:शुुल्क उपचार
३. निपा भाइरसबाट मृत्यु हुनुअघि केरलाकी नर्सले पतिलाई लेखिन् हृदयविदारक पत्र
४. स्वास्थ्य राज्यमन्त्री अर्यालको सम्पत्ति कति? ट्याक्टरदेखि मिडियासम्म लगानी
५. जेनेभामा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘हामी सहस्राब्दी लक्ष्य नजिक छौं’